Semester High School Program in Japan
မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း (MAJA) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၂) ရက် မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက် အထိ အထက်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်ရန် ကျောင်းသားလူငယ်များက်ို ရွေးချယ်စေလွှတ်မည်ဖြစ်ပါ၍ စ်ိတ်ပါဝင်စားသူများသည် သတ်မှတ်ချက်ဘောင် အတွင်း အကြုံးဝင်ပါက လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး အသက် ၁၅ နှစ် မှ ၁၇ နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
၂။ အောက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
1. Born between 22 April 2001 – 22 March 2003.
2. Current GPA no less than 3.00 without fail grade according to school standard.
3. Current study at 9th, 10th, or 11th grade or equivalent, and must remain student status until program finish. (သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်)
*Non-formal education or homeschooling are not accepted
5. Applicant must never joined more-than6month exchange program.
6. Highly academically motivated, high-achievers.
7. Learners of Japanese, or willing to learn some Japanese before the program.
8. Be able and willing to travel unaccompanied abroad.
9. Good Physical and mental health.
10. Preference will be given to candidates who are talented (sports /music / arts / etc.) or makeacontribution to their own society.
၃။ ရွေးချယ်ခံရပါက (MAJA) အသင်းမှ လိုအပ်သည့် သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အထက်အကြောင်းအရာပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသဖြင့် လျှောက်ထားလိုသူများသည်
(၁) Application Form ( MAJA ရုံးခန်းတွင်လာရောက်ထုတ်ယူရန်)
(၂) ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားနှင့် တကွ အမှတ်စာရင်း
(၃) MAJA အသင်းသားတစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာ
(၄) ဓါတ်ပုံ(1)ပုံ ( 3cm x 4cm )
(၅) Passport Copy (လျှောက်လွှာနှင့်အတူ (သို့) လူတွေ့ စစ်ဆေးသောနေ့)
တို့နှင့် တကွ MAJAရုံးခန်းသို့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ(၂)ရက် မှ (၉) ရက်အတွင်း ၊ ညနေ (၅း၀၀)ထက် နောက်မကျဘဲ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျောက်ထားရပါမည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက MAJA ရုံးခန်း (Room 707, 7th Floor, Bldg C, Pearl Condo, Kabar Aye Pagoda Rd, Bahan Tsp, Yangon) သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၉-၂၆၂၆၀၂၁၂၁ ၊ ၀၉-၄၂၈၆၁၂၁၅၁၊ သို့ ဖြစ်စေရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။